Imaaraadka oo Somaaliya ka Haysta saxiixa heshiis qarsoodi ah oo halis badan. – Xeernews24
Imaaraadka oo Somaaliya ka Haysta saxiixa heshiis qarsoodi ah oo halis badan.
Imaaraadka Carabta ayaa Soomaaliya ka Haysta heshiis u saamaxaya waxyaabo badan oo danahooda Soomaaliya ku saabsan, sida ay ogaatay Caasimada xilli Imaaraadka ay dagaal xooggan ku hayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Diblomaasiyiin ku sugan Muqdisho iyo Nairobi oo la hadlay Caasimada ayaa sheegay in inkasta oo Imaaraadka ay heshiisyo la kala saxiixdeen Somaliland iyo Puntland, si ay ula wareegaan dekedaha Berbera iyo Boosaaso, iyo saldhigga Berbera, haddana uu jiro heshiis kale oo ay la galeen dowladdii hore ee Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/dubay-arme.jpg 172 292 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-20 18:16:122017-10-20 18:16:12Imaaraadka oo Somaaliya ka Haysta saxiixa heshiis qarsoodi ah oo halis badan.
DIIRADDA XEERNEWS24.COM Dowlada Ethiopia oo deeq caga-jiid ah soo gaadhsiisay dalka Soomaaliya.